You searched for - Page2of 33 - Chelmo News Portal
Home›Search Results for "" (Page 2)
မနေ့က May လ 5ရက်နေ့ဟာ ဆိုရင်တော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ “ကလေးများနေ့” ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီ့နေ့မှာပဲ GOT7’s Youngjae အတွက် အသည်းနှလုံးကို ရိုက်ခတ်စေလောက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
Park Min Young , Go Kyung Pyo နဲ့ Kim Jae Young ဟာဆိုရင်တော့ “MonWedFriTuesThursSat” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ tvN ရဲ့ ဒရာသစ်မှာ အတူတကွသရုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် အတည်ပြုလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင်တော့ “MonWedFriTuesThursSat” လို့ခေါ်တဲ့ အိမ်ထောင်သည်များကိုတွေ့ဆုံပေးခြင်း နဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသမားတွေအတွက် ...
ကိုရီးယား အဆိုတော် Rapper ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ HyunA ဟာဆိုရင်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၃ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ Instagram Account ပေါ်ကို ရိုးရှင်းတဲ့ အဖြူရောင်ရှပ် Underboob ဖက်ရှင်နဲ့ခပ်မိုက်မိုက် ဂျင်းအပွတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို Caption မရေးဘဲ Sun , white heart , ...
ကိုယ်ပိုင် Agency တည်ထောင်လိုက်တဲ့ Ahn Hyo Seop
မကြာသေးခင်ကမှ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကြား ရေပန်းစားသွားတဲ့ ‘A Business Proposal’ ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Ahn Hyo Seop ဟာ ကိုယ်ပိုင် Agency ကို တည်ထောင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Agency နာမည်ကတော့ The present co.! ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပွဲဦးမထွက်ခင်တည်းက အတူတူလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ Ahn ...
မကြာခင် ပရိတ်သတ်တွေရှေ့ သီချင်းသစ်တွေနဲ့ ပြန်လာတော့မဲ့ Davichi
Davichi ဟာ အခုလအတွင်းမှာ comeback အတွက် ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုတတ်တဲ့ Davichi ဟာ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းတွေနဲ့ နာမည်ကြီးရုံသာမက ဇာတ်ဝင်တေးတွေကိုပါ ခံစားချက်ပါပါနဲ့ သီဆိုတတ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်မာရရှိထားတဲ့ အမျိုးသမီး duo အဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Davichi ...
Worldwide Scaleတိုင်းတာမှု အရ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ Kpop အနုပညာရှင် တွေများစွာထဲကမှ ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်း နိုင်ငံပေါင်း၁၂နိုင်ငံလုံးအသီးသီးမှာ ကြည့်ရှူသူအများဆုံး ကို သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်ငါးဉီးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် 1. South Korea Lim YoungWoong (54.5 million ) G)I-DLE (52.4 million ) ...
Seventeen အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ Instagram Account တွေအသီးသီးဖွင့်ထားပြီးနောက်မှာတော့ Dino ဟာလည်းပဲ သူ့ရဲ့ Official Instagram Account အသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်၊ Dino ဟာသူ့ရဲ့အကောင့်သစ်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း မနေ့က ၂၇ရက်နေ့မှာပဲ Seventeen’s Official Twitter Account မှာ Tweeted out လုပ်ရင်း ...
BlackPink ရဲ့ Comeback သတင်းအပေါ် ခပ်ထေ့ထေ့မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိတ်သတ်များ
Media တစ်ခုရဲ့ Apr 26 ရက်နေ့ကသတင်းအရ Blackpink အဖွဲ့က June လထဲမှာ comeback ထွက်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းအစားဆုံး topic ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ comeback ကို စောင့်စားနေကြတဲ့ပရိတ်သတ်တွေကတော့ ဒီသတင်းအပေါ် ခပ်ရွဲ့ရွဲ့မှတ်ချက်တွေ ပေးခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်အချို့ကတော့ ‘နောက်ဆုံးတော့ ...
သီချင်းတွေကို အသံချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့ သီဆိုတတ်တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chen ဟာ ဒီနေ့မှာဆိုရင် စစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှုထမ်းကာလကတော့ Oct 26,2020 ကနေ Apr 25.2022 အထိဖြစ်ပြီး စစ်မှုထမ်းကာလအတွင်းမှာ Chen ဟာ ဒုတိယရင်သွေးလေးကိး ပြီးခဲ့တဲ့ Jan လက ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Chen ...
ကလဲ့စားချေဖို့အတွက် ပထမခြေလှမ်းကို စတင်တော့မဲ့ Lee Joon Gi ရဲ့ Again My Life ဒရာမာဇာတ်လမ်းအပိုင်းသစ်
မင်းသားချောလေး Lee Joon Gi ပါဝင်တဲ့ Again My Life ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာဆိုရင်တော့ Joon Gi ဟာ အလုပ်ကြိုးစားပြီး အကျင့်ပျက်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဉီးရဲ့ မတရားမှုကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်စုံစမ်းရတဲ့ အစိုးရရှေ့နေတစ်ဉီး Kim Hee Woo အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်